Adolf Hitler i vezetarianina
Garabola te "afa-tsy ny rivo-piainana" ny ankizy rehetra mba hihinana zavamaniry.
Nihevitra aho ny momba izany amin'ny Adolf Hitler, rehefa namaky fa misy ny akanin-jaza any amin'ny faritra avaratr'i Soeda izay te-"afa-tsy ny rivo-piainana" ny ankizy rehetra mba hihinana zavamaniry. Inona no mitranga?
"Ny sasany dia tsy hena, satria Hitler dia zavamaniry. Ny sakafo tsara, tsara indrindra izany, fa tsy afaka mankafy azy io."
Izany no manazava ny iray amin'ireo Hitler provsmakerska Margot Wölk izay tafavoaka velona ny Ady Lehibe II. Ao amin'ny Hitler ny lovia ireo legioma, sauces, paty vilia sy ny voankazo hafakely.
Hitler sakafo drafitra ho an'ny ady
Misy hevitra samy hafa ny antony i Hitler zavamaniry. Angamba izany dia noho ny antony ara-pahasalamana, satria nanana olana tamin'ny kibony.
Mba manoratra Joseph Goebbels tao amin'ny diariny, April 26, 1942:
"Ny be resaka ampahany amin'ny mpitarika natokana ho an'ny zavamaniry fanontaniana. Izy no Resy lahatra kokoa noho ny hatramin'izay ny mihinana hena dia manimba ny maha-olombelona. Mazava ho azy, fantany fa nandritra ny ady tsy afaka manova ny sakafo ankapobeny. Fa rehefa ny ady, dia mikendry mba hiatrehana io olana io. Angamba marina izy. "
Nihevitra aho ny momba izany amin'ny Adolf Hitler, rehefa namaky fa misy ny akanin-jaza any amin'ny faritra avaratr'i Soeda izay te-"afa-tsy ny rivo-piainana" ny ankizy rehetra mba hihinana zavamaniry . Inona no mitranga?
Sakafo rehetra nodiovina
Ao amin'ny Baiboly no mahazo hihinana sakafo isan-karazany. Tsy misy fandrarana. Tsy misy angamba tsy olana ny toetrandro na inona ny sakafo hohanina, fa Efa ampy ny olana hafa. Fa izany eo ihany, diovy ny vatanao ny hanina rehetra, izay Jesosy ihany no milaza.
Mark 7:18. Dia hoy izy: [i Jesosy] tamin'ireo: Moa ianao koa Adala toy izany? Ve tsy mahalala fa avy any ivelany na inona na inona avy any no mahaloto azy? 19. Fa tsy miditra ao am-pony fa ao an-kibony, ny alalan 'izay rehetra hanina ho voadio sy manana ny farany voajanahary.
Ankoatra izany, dia toy izany koa ao amin'ny Baiboly:
Asan'ny Apostoly 15:28. Fa ny Fanahy Masina sy izahay tsy nanapa-kevitra ny hametraka eo aminareo tsy nisy lehibe noho entana afa-tsy izany no ilaina:
Tena antony Tiako izany mikasika ny zavatra ilaina sy tsy misy ilàna azy: Mihinàna ny zava-drehetra araka ny antonony dia ho mety tsy misy olana.
Inona no fampaherezana antsika izany. Tsy hirotsaka amin'ny be sy ny fanaraha-maso ny lalàna mba ho voavonjy. Ihany no zavatra iray loha no zava-dehibe ary izany dia ny fanekena an'i Jesosy ary ho voavonjy.
Aho indray mandeha mamaky momba ny dokotera, izay nisotro roa litatra ny karaoty ranom isan'andro satria mety ho ilaina. Maty ny simba anefa ny aty tsy afaka mandray be karaoty ranom isan'andro.
Ity ny toetr'andro toa ny evasion mba hifehezana ny olona. Manao ahoana ny fandaharam-potoana Marina Momba? Moa ny farany ho afaka ny hametraka ny Antikristy eo amin'ny seza fiandrianana?
Mila matahotra ny zavatra hohaniny, ka tsy mila ny hanana feon'ny fieritreretana ratsy. Hihinana sy mahatsapa tsara. Aza latsaka noho ny fampielezan-kevitra izay azo amin'ny fomba samihafa ny fitantanana sy hifehy ny fiainanao. Fampielezan-kevitra toy izany dia lasa bebe kokoa hita eo amin'ny fotoana ankehitriny fa miaina ao. Ho famantarana ny fotoana.
Ny hany zavatra izay manan-danja sy manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanao dia ny hoe manaiky an'i Jesosy Kristy sy ho voavonjy!
Rome 14:17. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny zava-pisotro, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina.
Vecka 30, måndag 26 juli 2021 kl. 19:35